Echiche Mygha na-agụghị: Raven's Banquet Bonus Episode Before Season XNUMX Premiere | Esi m mac
Anyị na-aga ịhụ otú ọ ga-esi meghee nke abụọ oge site na usoro Apple TV mbụ + Mythic Quest: Raven's Banquet na Apple na-eju anyị anya agbakwunyere isi nke ga-ebuputa tupu nke a. Usoro a, nke ndi mmadu nabatara nke oma, choro ikele ndi nile choro maka ezigbo nnabata nke mmeputa.
Apple TV + na-akwadebe ihe omume ọzọ nke Mythic Quest. Na nwunye «Everlight» na-amalite na Eprel 16 n'elu ikpo okwu gụgharia, mgbe ihe omume pụrụ iche nke usoro ahụ gbasaa otu afọ gara aga, n'okpuru aha nke Kwarantaini. Ihe omume a ga-egosi anyị ndị otu Mythic Quest na-alọghachite ọrụ mgbe ọrịa coronavirus gbasasịrị na mmemme Everlight ha na-eme kwa afọ. McElhenney ekwuola na nke a:
Mgbe bụ ihe omume pụrụ iche nke na-ekwu banyere ihe isi ike na mmetụta uche nke ịlaghachi na nkịtị. O jupụtara n’olileanya, ọ joyụ, na nchekwube maka ọdịnihu dị mma. Tupu oge nke abụọ anyị na-abịa, anyị chere na ọ bụ ụzọ zuru oke (na oge zuru oke) ịkpọ ndị na-ege ntị ntị na ụwa nke Mythic Quest.
A ga-ewepụta oge nke abụọ na May 7 na anyị agwaworị gị maka ya. Oge nke ihe omimi ohuru sitere na ndi ozo nke Apple TV + nke a, dika anyi kwuru na mbu, nwere nnabata di nma nke ndi na-ege nti. Ọ bụghị nke na-erughị, iji hụ ahụmahụ dị omimi nke ndị protagonists ya. Mgbe iche iche nke ọrịa a na-efe efe gafere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla alọghachila n'ọfịs ugbu a, na-anwa ịkwalite ihe ịga nke ọma nke Raven's Banquet site na ịmalite mgbasawanye ọhụụ ọhụrụ.
Oge ga-abụ ihe dị ka Isiokwu ndị na-esonụ nke ndi n’agha anyi. Ian (Rob McElhenney) na onye nduzi ohuru na-akwalite Poppy (Charlotte Nicdao) na-eduzi egwuregwu nke egwuregwu. Ka ọ dị ugbu a, CW (F. Murray Abraham) na-eme ka ụfọdụ nsogbu a na-edozighị edozi site n'oge gara aga. Ndị nyocha ahụ (Ashly Burch na Imani Hakim) ga-anwa ịchọpụta ihe njedebe nke ọfịs ọfịs bụ, na David (David Hornsby) enweghi ihu ọma na ụmụ nwanyị ọzọ, n'oge a na Jo (Jessie Ennis) na-ahapụ ya iji nyere aka. Brad (Danny Pudi).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Thgha mythic: Raven's Banquet bonus episode n'ihu nke oge XNUMX premiere
Etu ị ga - esi mee ka oge ịdọ gị aka ntị na Apple Watch gị